JWZ-BMHG50 / 100/160 Double Layer Blow Moll Machine
Mety amin'ny famokarana amponga misokatra roa sosona 20-200L, amponga boribory "L" avo roa heny.
Mampiasà rafitra fitrandrahana avo lenta, karazana maty manangona karazana dobo roa sosona.
Ny sosona ivelany dia amin'ny loko mainty na manga izay afaka mamerina ny UV sy ny fahanteran'ny fahazavana. Ny sosona anatiny dia loko miloko mba hahazoana antoka ny fahadiovan'ny atiny. Azo antoka kokoa ny fampiasana azy io. , ary mandritra izany dia miantoka ny kalitaon'ny vokatra rehetra.
Double layer Manangona karazana
Haben'ny masinina L * W * H
JWZ-BMHG160 / 230 Machine milomano mitsivalana
Tantaran'ny haingam-pandeha haingam-pandeha PVC & tsipika fampisosehana amin'ny profil